Arsenal oo guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Rennes kulan ka tirsan tartanka Europe League +Sawiro – Gool FM
(Yurub ) 7 March 2019 kooxda Rennes ee dalka Farance ayaa dhulka ku jiiday kooxda Arsenal kulan katirsan lugta koowaad ee wareega 16-ka ee tartanka Europe League, kulanka ayaana ku soo dhamaaday 3-1
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan kooxda Arsenal oo marti aheyd ayaana la timid gool qeebtii koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey laacibka reer Afrika ee Alex Iwobi daiiqadii 4-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas caawinteeda la haa daafaca reer Spain ee Nacho Monreal.
Sokratis Papastathopoulos oo daafaca dhexe ugu ciyaarayey kooxda Arsenal ayaa qaatay jaalihii koowaad ee ciyaarta laga bixiyo kaddib inta uusan qaadan mar labaad deetana ciyaarta laga saaray daqiiqadii 41-aad ee ciyaarta .
Arsenal waxaa ku yimid habacsanan madaama ay ku ciyaarayeen 10-xidig oo qura kooxda reer Farnce ee Rennes ayaana la timid goolkii bareejada ee ciyaarta waxaana u dhalieyey xidigooda lagu magacaabo Benjamin Bourigeaud daqiiqadii 42-aad ee ciyaara .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa lagu kala nastay 1-1 , waxaana loo huleelay qolka labiska si ay ciyaartoyda u soo qaatan nasiino iyo talooyin wax ku ool ah .
Waxaa dib la isagu soo laabtay garoonka waxaana la baastay qeebtii dambe ee ciyaarta xili Arsenal ay muteesatay kaar casaan ah qeebtii koowaad ee ciyaarta , kooxda Reer farnce ee Rennes ayaa weerarka kulaba jibaaraty kooxda reer Londone.
ugu dambeen kooxda Gunners ayaa iska dhalisay gool kam ah waxaana iska dhaliyey Nacho Monreal daiiqadii 65-aad ee ciyaarta , natiijada kulanka ayaa noqday 2-1 oo ay ku hhor kaceyso kooxda gurukeeda lagu ciyaarayo ee Rennes .
Ismaila Sarr oo ah weeraryahanka kooxda Rennes ayaa u sedexeyey kooxda Arsenal daqiiqadii 88-aad ee ciyaarta waxaana goolka uu dhaliyey ka caawiyey laacibka lagu magacaabo James Lea Siliki.
ugu dambeena ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1 oo ay guushu ku raacday kooxda Rennes , garoonka kooxda Arsenal ayaana lagu ciyaari doonaa kulanka lugta dambe ee wareega 16-ka ee tartanka Champions League .
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Chelsea Vs Dynamo Kyiv